काबुलीवालाको नयाँ अवतार - मनोरञ्जन - नेपाल
काबुलीवालाको नयाँ अवतार
सन् १८९२ मा रवीन्द्रनाथ टैगोरले बंगाली भाषामा एउटा कथा लेखेका थिए, काबुलीवाला । एउटा वयस्क अफगानी फिरन्ते र उसकी छोरी उमेरकी भारतीय फुच्चीको मित्रताको यस कथालाई टैगोरको कालजयी सिर्जना मानिन्छ । यसलाई ‘एडेप्टेसन’ गरेर देव मेधेकरले फिल्म बायोस्कोपवाला बनाएका छन् । फिल्म १७ जेठमा सार्वजनिक प्रदर्शन भयो । र, जसरी टैगोरको कथाले तारिफ पाएको थियो, सोही अनुपातमा बायोस्कोपवालालाई प्रशंसाको वर्षा भइरहेको छ । प्रतिष्ठित इन्टरनेट मुभी डाटाबेस (आईएमडीबी) को रेटिङ छ, ८.७/१० ।
त्यसो त काबुलीवालालाई पर्दामा रुपान्तरण गर्ने देव पहिलो निर्देशक होइनन् । यसअगाडि सोही नाममा सन् १९५७ मा बंगाली, १९६१ मा हिन्दी फिल्म र टेलिभिजन सिरिज बनिसकेका छन् । तर, देवको बायोस्कोपवाला विशेष मानिएको छ । अझ सुखद पक्षचाहिँ, यस फिल्मको शीर्ष भूमिकामा नेपाली मूलका दुई कलाकारले अभिनय गरेका छन्, डेनी डेनजोङ्पा र गीताञ्जली थापा । डेनीका बारेमा त बताइरहनु नपर्ला, गीताञ्जली पनि हिन्दी सिनेमाकी नयाँ सितारा हुन् । उनले सन् २०१३ मा लायर्स डाइस नामक फिल्मबाट उत्कृष्ट अभिनेत्रीको नेसनल अवार्ड चुमेकी थिइन् । बायोस्कोपवालाले उनको कद अझ बढाएको छ । निर्देशक देवले गीताञ्जलीमा मीनाकुमारीको झल्को पाएकाले आफूले मुख्य भूमिकामा कास्ट गरेको बताएका छन् ।
फिल्मको कथा अनुसार अफगानिस्तानबाट रेहमत खान (डेनी) भारत आउँछन् र आफ्नो बायोस्कोपबाट बच्चाहरुलाई फिल्म देखाउँछन् । त्यही बेला उनको पाँच वर्षीया फुच्ची मिन्नी (गीताञ्जली) सँग दोस्ती प्रगाढ हुन्छ । उनी मिन्नीलाई रमाइला–रमाइला कथा सुनाउँछन् । तर, एकाएक गायब हुन्छन् । समयक्रमसँगै मिन्नी डकुमेन्ट्री फिल्ममेकर बन्छिन् । त्यसपछि उनीहरुको पुनर्मिलन होला ? पुराना यादलाई कसरी सम्हालान् ? यो प्रेमलाई देवले अत्यन्त सुन्दर ढंगबाट पस्किएका छन् ।
हिन्दुस्तान टाइम्सले डेनीलाई सानदार र बायोस्कोपवालालाई सिनेमाको शक्तिको प्रतिविम्ब भन्दै लेखेको
छ, ‘निर्देशकले टैगोरको काबुलीवालामा राजनीतिक, सामाजिक र भावनात्मक तह थपेका छन् ।’ त्यस्तै, इकोनोमिक टाइम्सले चाहिँ प्रेम, वियोग र सम्बन्धको सुन्दर कथा भनेको छ ।